Analog "naftizina". Ukubuyekeza, intengo. Yini esikhundleni "Naphthyzinum"
Ikhala elivuzayo nezinkinga acinene ukuminyana - yisimo, elalibheke bonke okungenani kanye ezimpilweni zabo. Amanye ezwa njalo futhi zilungele ungasebenzisi noma yiziphi izindlela, kuyomane bakwazi ukuphefumula evamile. Ethandwa kakhulu zishibhile amathonsi acinene, okuyinto nethonya vasoconstrictive.
Akwaziwa iminyaka eminingi Isidakamizwa "Naphthyzinum". Lawa amathonsi eshibhe, futhi ruble 30-40 nje, ungakwazi ukuqeda ukuminyana acinene. Kukholakala ukuthi "Naphthyzinum" ephephile, abantu abaningi kangaka ukuzisebenzisa njalo ngisho kwehla izingane zakhe. Kodwa akubona bonke abantu uyazi ukuthi lokhu izidakamizwa zikwenza. Kwaze kwaba yilapho sebeshiye kuba sobala ukuthi abantu ngaphandle la amaconsi hhayi uphefumule, uqala ukucinga Analogue "naftizina". Ngakho, ngaphambi kokuba uqale noma iyiphi indlela edingekayo ukuze ufunde imiyalelo kuye futhi kudokotela.
Ukwakheka "naftizina" futhi ikakhulukazi izenzo zakhe
The main isithako zomuthi kuyinto naphazoline. It kungokwalabo iqembu alpha-agonists. Lokhu kwaziswa kunciphisa ukuvuvukala kanye ububomvu, kunciphisa umthamo wegazi egeleza ngokusebenzisa ama-capillary, futhi kunciphisa uketshezi isikhwehlela. Ngenxa yalesi acinene ngcono ukuphefumula cishe ngokushesha ngemva kokuba instillation yokulungiselela. Ukukwazi kwakhe ukudubula mucosal ukuvuvukala masinya, futhi unciphise imithambo yegazi ivumela ukwehla rhinitis, sinusitis, rhinitis iguliswa, isimo ngemuva kokuhlinzwa. Kodwa kufanele wazi ukuthi isenzo "naftizina" Nokho okwesikhashana, kodwa kunalokho iDemo. Ngaphandle ekhethekile imithi umkhuhlane liyadingeka okwandisa umthamo amathonsi. Lokhu kungaholela yoma we mucosal semithambo, vasomotor rhinitis futhi "naftizinovoy" nokulutheka. Futhi akusiwona nje ukuluthwa okuncane, usesimweni esibucayi ukuze ukususa kunzima.
Ngokuvamile, uyakwazi ukuhlangana nabantu abathanda ngaso sonke isikhathi phatha ibhodlela amaconsi. Futhi ezinye njalo, izikhathi eziningana drip usuku "Naphthyzinum". Ukuqalisa esetshenziswa izidakamizwa eba kancane kancane futhi ngokuvamile waphawuleka ngokuphelele yisiguli. Kube amakhala yisisu, aconsa "Naphthyzinum" - sekulula. Ngezinye izikhathi - into efanayo. Futhi ngemuva kwesikhathi esithile, umuntu akakwazi ukuphefumula ngaphandle izidakamizwa futhi kufanele ulisebenzise njalo. imithambo yegazi mucosal bazolahlekelwa amandla Taper ngaphandle "naftizina", kubalulekile iconsa izikhathi eziningana ngosuku noma ikhala nikubeke ezinhliziyweni zenu. Ngenxa yalokhu, abantu abaningi baye baba sincike izidakamizwa, ahlupheke: zingashintsha izwi, ikhono ukuqaphela iphunga avele ukucasuka nokwesaba miss instillation. kuphakama bethembela ngenxa nokusebenzisa kabi izidakamizwa. You azi ukuthi "Naphthyzinum" - lokhu akulona ikhambi komkhuhlane. He yodwa kusiza ekudambiseni ukuvuvukala futhi unciphise ukuphefumula acinene. Ngokushesha okukhulu izitsha mucosa acinene bazivumelanisa izidakamizwa, ngiyeke phansi ukuba osabela ngayo kukho. Ngakho-ke, zokususa umthamo acinene kumele kunyuke kanye nenani instillation.
Indlela ukuqeda sokuncika
"Naphthyzinum" impumulo econsa eziningi ngisho ngaphandle udokotela. Kufeza indima ebalulekile ukuthi liyatholakala kuso nokusenza umkhuba usebenzisa iminyaka eminingi. Amakhemini ngokuvamile ukudayisa izidakamizwa ngaphandle yokusetshenziswa, futhi abaningi ngisho nokuwabona ukuthi kungaba yingozi. Abanye abantu, ikakhulukazi isizukulwane amadala, futhi abawazi ukuba khona ngaphezulu amathonsi yamuva, wathi uzosebenzisa ajwayelekile "Naphthyzinum". intengo yaso yokuthi uthenge futhi iconsa kungaba ngokuvamile - ibhodlela angathengwa ruble 30-40. Ngakho-ke, abantu sincike izidakamizwa ke balahle ukuthi nzima kakhulu. Ngokuvamile ukuncoma nje ukuyeka izidakamizwa futhi izinsuku 3-5 kuze izitsha wean kusukela amathonsi, ukubekezelela ekhaleni stuffy. Ezimweni ezimbi kakhulu kungase kudinge ngisho kokungenela kuhlinzwa. Ngakho-ke kungcono ukugwema sina yizidakamizwa futhi usebenzise kahle. Abanye abantu batusa ukusebenzisa noma isiphi Analogue "naftizina", elokhu enciphisa umthamo. Ukubuyisela ezilimele mucosa acinene kungenziwa iconsa ukulungiselela herbal "Pinosol".
zokupheka boMdabu ukuphefumula kulula
Ukuze balahle "naftizinovoy" ithemba, ungasebenzisa amakhambi ezahlukene ekhaya. Akuwona wonke umuntu beza kaningi uzamile izindlela eziningi ngaphambi kokuba uthole ngempumelelo. Kodwa namanje ungcono lincike isitsha ne amathonsi. Ngakho yini indawo "Naphthyzinum" kusuka amakhambi abantu?
1. Shutheka juice kusukela ishidi elikhulu Aloe, engeza ziyacolwa iphilisi "levomitsitin" futhi "Diphenhydramine" anikine kahle. Lokhu kusho ukuthi kudingeka iconsa izikhathi 5-6 ngosuku, futhi emva kwezinsuku 2-3 ngcono.
2. Kathathu ngosuku kufanele ifakwe ngamunye swabs ikhala ofakwe uwoyela "Vitaon" isixazululo. Kuyinto efiselekayo uwagcine okungenani ihora. Ukwelashwa Kwenziwa izinsuku ezingu-10 futhi ukuphuza "Fenkarol" ngenkathi kabili ngosuku.
3. Mix lemon basonta e-grinder inyama nge esilinganayo Linden uju. Osukwini uketshezi akhanywa futhi bagxilisa ku ikhala ngamunye 2-3 izikhathi ngosuku, isipuni ikota.
4. Uma uhlanganise izingxenye alinganayo uwoyela camphor, tincture propolis, namafutha, kumhambele kunalokho ezingemnandi, kodwa ekhaleni ngempumelelo lehla. Badinga ukusebenzisa iconsi kathathu ngosuku.
5. Kuhle kusiza umpe celandine. Nakuba kunzima ukulungiselela, kodwa ngemva kwezinsuku ezinhlanu ukwelashwa umuntu angakwazi ukuphefumula ngokukhululekile. Kuskrolelwa ngokusebenzisa inyama grinder isitshalo kufanele kahle ukunqoba ngokusebenzisa gauze futhi bagcizelele juice ngeviki, kunyakaze nsuku zonke futhi ikhipha umoya abelokhu evalelekile. Kungaleso sikhathi kuphela lapho ilungele ukusetshenziswa. Kodwa kubalulekile ukuba iconsa akukho iconsi ezingaphezu kweyodwa 2-3 izikhathi ngosuku.
Abanye usizo balahle "naftizinovoy" Kuye ikhambi uwoyela tea tree, nezinye Kalanchoe juice noma uwoyela ulwandle lalesi sihlahla. Le nqubo ingathatha amaviki 1-2, kodwa ngemva kwalokho ikhala ukuphefumula ngaphandle amathonsi.
Yini esikhundleni "Naphthyzinum"
Ukuze impumuzo ngokushesha ukuphefumula acinene angasebenzisa amalungiselelo equkethe isithako efanayo esebenzayo - kuba "Sanorin" noma "naphazoline." Baziwa isikhathi eside futhi emithini abakwaziyo ukuyikhokhela. Yini esikhundleni "Naphthyzinum» Okuningi? Eminyakeni yamuva, ivikeleke kakhulu vasoconstrictor izidakamizwa. Abenzi lutho ukuqondisa analogue "naftizina", njengoba beye benza ukubunjwa omunye isithako esebenzayo. I amathonsi ezisetshenziswa kakhulu ngesisekelo oxymetazoline "Xylene", "Xylometazoline", "Tizin", "Nazivin", "Reno Stop", "Nazol", "Snoop" nabanye. Yiqiniso, fanekiso ukuba "naftizina" nokulungiselelwa kuyimiphumela lezi amathonsi eshibhile. Kodwa kukhona okuningi ngaphansi engabangela side effects kanye umlutha.
The best Isifaniso "naftizina"
Amaconsi kokuba ukwakheka efanayo nokuba nomphumela ofanayo - lokhu "Sanorin". Kuwufanele kuyabiza "naftizina" - ruble 60 kuya ku-100, futhi itholakala ngezindlela ezihlukahlukene:
- lehla izingane kusukela eminyakeni emibili aqukethe kwesigamu nafazolina umthamo omdala;
- lehla noma fafaza abadala nge 0.1% isithako esebenzayo;
- emulsion "Sanorin" yakhiwa uwoyela zikagamthilini kanye upharafini liquid.
Umuthi akufanele isetshenziswe ngaphandle somuthi nokusetshenziswa kwawo sikadokotela, njengoba nje iye Izimo, futhi kungabangela abanye imiphumela emibi. Akumele kusetshenziswe isikhathi esingaphezu kwesonto, nezingane - izinsuku ezingaphezu kwezintathu. "Sanorin" kungabangela ubuhlungu bekhanda, kukhuphuke blood pressure, isicanucanu nokungezwani komzimba.
Izibuyekezo sokusebenza kwawo
Naphezu kweqiniso lokuthi ngesisekelo nafazolina mithi iyaheha kakhulu, zisatholakala ethandwa. Futhi akusiwona kuphela ukusetshenziswa kwazo esikhathini eside esizayo. Ayashesha ngempela futhi ukunciphisa ngempumelelo ukuvuvukala futhi ziqede acinene ukuphefumula. Sam "Naphthyzinum" ngenxa wentengo ongaphakeme ngokuvamile kakhulu uthenge ngoba impatho rhinitis ngaphandle kadokotela. Iziguli ukubika ukuthi izidakamizwa ngokushesha nangempumelelo aqede acinene ukuminyana. Ngaphezu kwalokho, kwehla ngisho nezingane, ezimweni lapho kungekho ezinye izidakamizwa musa asize. Popular futhi eyaziwa kakhulu Analogue "naftizina" - "Sanorin". Nakuba kubiza ngaphezulu, kodwa futhi ngokushesha ukubhekana ngokuphumelelayo ukuminyana acinene. A emulsion equkethe uwoyela zikagamthilini, futhi kunciphisa ukuvuvukala. Ngakho-ke, abantu abaningi bathanda ukuyisebenzisela imikhuhlane.
Okunye amathonsi vasoconstrictive endaweni ekhaleni
Ngenxa nesenzakalo njalo ezifana side effects kusukela ukusetshenziswa "naftizina" futhi analogue yayo kungcono hhayi uqala ukuzisebenzisa. Futhi uma uke kuncike kanjani ukuyeka imithi ukuvuza ngokushesha ngangokunokwenzeka. Ukuze ekususweni edema mucosal Kunconywa ukusebenzisa noma isiphi esikhundleni "Naphthyzinum" oxymetazoline based. Kunemithi eminingi e ezahlukene izigaba intengo nanoma ubani ungakhetha imithi ethengekayo futhi iphephile.
Indlela yokusebenzisa kahle amathonsi ezifana
- Zonke yokuvula amakhala, futhi ikakhulukazi lezo zifaka naphazoline, ayikwazi ukusetshenziswa isikhathi esingaphezulu kwezinsuku 3-5. iyeke Kungenjalo lwamafinyila ukuphendula kubo kanye nokulutheka livela.
- Ungayisebenzisi iningi vasoconstrictor izingane ezingaphansi konyaka, iziguli sikashukela kanye nomfutho wegazi ophezulu, futhi ezingalapheki amakhala yisisu.
- Iningi le mithi akunconywa ukusetshenziswa phakathi nokukhulelwa kanye lactation. Kulokhu, udinga ukugeza impumulo yakho nezixazululo usawoti noma ukuvuza "Pinosol."
Metronidazole kanye notshwala: Oluvumelana
Medicine "Afluton": yokusetshenziswa futhi impendulo
"Tonsilgon®" izidakamizwa. Yokusetshenziswa
Umlingisi Ivars Kalnins: Biography, ukuphila siqu, Filmography futhi amaqiniso athakazelisayo
Ukwelashwa nokuvikelwa igciwane lohlobo
Summer isigqoko ngoba amantombazane crocheted
Indlela ukupheka yenkomo ukwenza kube soft? amathiphu chef
Izinkampani zomshuwalense Property
"Fiat": ibanga izici onobuhle ezithandwayo
Celandine - izici ezibaluleke kanye contraindications
Indlela ukubeka izithonjana "ukuxhumana" odongeni hhayi umlayezo?